सतही ढलमा धुलो बढ्नुमा को बढी जिम्मेबार
Admin | २०७४-११-०४ | १६४ १२
सतही ढलको माटो महानगरले बटुल्ने कि सडक विभागले
४ फागुन २०७४
काठमाडौँ । सडकको सतही ढलमा धुलो जम्मा हुनुकोकारण पत्ता लगाएर त्यसको जरैदेखि समाधानको उपाय नखोजी सडक जति बढारे पनि सफा नहुने सफाइमा खटिएका कर्मचारीले बताएका छन् । शुक्रबार विहान पुतलीसडक चोकदेखि बागबजार सडक खण्डको सफाइका लागि खटिएका कर्मचारी दिक्क मानेर भन्दै थिए, ढलमा जम्मा भएको माटो खाँदिएर चट्टान जस्तो भएको छ । कति ठाउँको माटो र फोहोर मिलेर मल जस्तै भएको छ । मूल सडकको धुलो सडक विभाग व्यवस्थापन गर्नु पर्ने हो कि, महानगरले? उनीहरुको गुनासोको एकपछि अर्को निकायसँग बढ्दै थियो — सडकमा काम गर्ने ठेककेदार काम नसकी पैसा लिएर जान्छ । भित्री क्षेत्रको संरचना बनाउँदा सडकमा थुपारिएको बालुवा, इटा र गिटीको केही भाग त्यहीँ छोडिन्छ । विगार्ने धेरै छन्, हामीले कहिले सफाइ गरिसक्नु?
उनीहरुको भनाइ र महानगरले विगत लामो समयदेखि सञ्चालन गरिरहेको सफाइ अभियानको परिणाम मिसाएर हेर्दा कर्मचारीको गुनासो स्वभाविक लाग्छ । सडकको सतह उपयोग गर्नेको संख्या धेरै छ, तर व्यवस्थापन गर्ने निकाय र ती निकाउमा सफाइमा काम गर्ने मानिसको संख्या कम छ । अर्कोतिर सडकमा धुलो जम्मा हुनुकोकारण पूर्वाधार निर्माणको काम मात्र होइन, सहरमा कस्ता सवारी साधन गुड्छन्? ती साधन कहाँबाट आउँछन् र पाङ्ग्रामा धुलो लिएर आउँछन् कि आउँदैनन् भन्ने विषयमा पनि जोडिएको छ ।
यी र यस्ता विषयको समाधान नगरी सडक पखालेर वा बढारेर मात्र परिणाम आउने देखिँदैन । शुक्रबार संकलन भएको माटोको परिमाणले पनि यही देखाउँछ । हरेक दिन जसो बढारिएको, सहरको मुख्य सडकमध्येको एक खण्ड बागबजारको करीव आधा १ किलोमिटर खण्डमा १० ट्रिपर माटो संकलन भएको थियो ।
महानगरको वातावरण व्यवस्थापन विभागले यसरी धुलो बटुलेको धेरै समय भइसक्यो तर नागरिकले धुलोमुक्त सडक भयो भनेर महसुस गर्न पाएका छैनन् । न त उपत्यकामा बायु प्रदुषणको मात्रा घटेको छ । यसो हुनुमा महानगरले काम नगरेर होइन वरु धुलो बढ्नुको कारण नखोजेर हो कि जस्तो देखिन्छ ।
त्यसैले सरसफाइ अभियान सञ्चालन गरिरहँदा धुलो बढ्नुको कारण र ती कारण न्युनीकरणमा काम थालनी गर्न जरुरी देखिएको छ ।
सडकको सतही ढलमा जम्मा भएको माटो
मेयर शाक्य तेल अभिभको हरियालीबाट प्रभावित Previous Post
महसुस योग्य विकास मेरै पालामा सम्भव बनाउँछु — मेयर शाक्य Next Post